Ikhaya Leholide Elimangalisayo lezinkanyezi ezi-5 le-spa
Palm Springs, California, i-United States
I-Sparkling 3000 sq ft ekhaya eklabhu yezwe enesango elikhethekile endaweni yegalofu edumile. I-villa yaseSpain ebheke e-SE echibini elinelanga le-spa elizungezwe ivulandi engadini ene-BBQ eyakhelwe ngokwezifiso enendawo yokudlela evikelekile yangaphandle kanye nomgodi womlilo ohlukile.
Okuchazwe kahle kakhulu njengeCampo Tranquilo
QAPHELA uJim noDeb ungumbungazi ovelele Ababungazi abavelele asebemnkantsh' ubomvu, ababungazi bezinga eliphezulu abazinikele ekuphatheni izivakashi ngendlela efanele.
Qaphela Ukushisa kwamahhala kubhavu oshisayo kanye nephuli. I-Wi-Fi yamahhala nomculo we-Bose
Ngemva kokuhlola isango elikhulu le-Bermuda Dunes Country Club, ukuhamba kahle kwemizuzu emi-3 kukuletha esangweni le-Castle Harbour okuwumphakathi omncane omuhle kakhulu kuso sonke isigodi. Ipharadesi lethu esilibiza ngothando ngokuthi i-Campo Tranquil libheke enkundleni yegalofu edumile yase-Bermuda Dunes .Igceke elingemuva linotshani be-badminton/croquet kanye nengadi enhle enezihlahla ezungeze ichibi, i-spa, indawo yokucima umlilo kanye nebha yangokwezifiso/ I-BBQ ebheke ku-7th Hole fairway.
4.86 ·88 okushiwo abanye
4.86 · 88 okushiwo abanye
Indawo enhle evikelekile evikelekile yokuhamba ngezinyawo ekuseni nokugibela ibhayisekili. Ukubuka inkanyezi ngobusuku obucwebile obusogwadule usuka egcekeni kuyisipho
Umnakekeli ongekho endaweni okhona ukuze anikeze usizo uma kudingeka
Hlola ezinye izinketho ezise- Palm Springs namaphethelo